मिल चलाउने कल्पनाको लोभलाग्दो हिम्मत
बुटवल | मंसिर १८, २०७८
लोकान्तर संवाददाता आचार्य लुम्बिनी प्रदेशबाट रिपोर्टिङ गर्छन् ।
सबेरै उनको मोबाइलमा घण्टी बज्छ । मिल बन्द त छैन नि ? हतारिँदै उठेर हातमुख धोएर उनी मिल छिर्छिन् ।
उनीलाई बस्ने र आराम गर्ने फुर्सद समेत हुँदैन । कुनै–कुनै दिन त उनलाई खाना खाने फुर्सद समेत हुँदैन ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमाकी कल्पना पाण्डेको दिनचर्या अहिले यसरी नै बितेको छ । पाण्डेय दुर्गा तेल मिलकी सञ्चालक हुन् । मझौला उद्योग चलाएर कल्पनाले घरखर्च मात्र चलाएकी छैनन्, राम्रो कमाइ पनि गरेकी छन् । उनले कर्मथलो बनाएकी छन्, तिलोत्तमा–३ जानकीनगरमा मिल ।
पहिला कल्पनाका ससुराले तेल मिल सञ्चालन गरेका थिए । छोराहरूमा अंशबण्डा भएपछि जेठा छोरा अर्थात् कल्पनाका पति कृष्णले नगद ९ लाख रुपैयाँ तिरेर आफ्नो भागमा मिल पारेका थिए । मिल आफ्नो भागमा परेपछि कल्पनाले मिलमा कुटानी–पिसानी लगायतका सबै व्यवस्थापन आफैं गर्न थालिन् ।
कल्पनाले भनिन्, ‘महिलाले मिल चलाउने काम अनौठो भए तापनि मैले भने २–४ दिनमै मिल चलाउन सजिलै सिकें । शुरूशुरूमा मिलको आवाज सुन्दै डर लाग्थ्यो र कुनै पनि किसिमका दुर्घटना पो हुन्छ कि भन्ने मनमा त्रास हुन्थ्यो तर राम्रोसँग मिल चलाउन सिकेपछि डर, त्रास आफैं भागेर जाँदो रहेछ ।’
‘भेलसँग डराएर डुंगा नदी पार हुँदैन, कोसिस र प्रयास गर्नेको कहिल्यै हार हुँदैन,’ उनले निर्धक्कसँग भनिन् ।
करीब १ कठ्ठा जग्गामा रहेको तेल मिल कल्पनाका लागि कर्मथलो भएको छ । कल्पना बिहानै मिलको ढोका उघार्छिन् र राति ८–९ बजे बन्द गर्छिन् । उनको मिलमा गहुँ, कोदो, मकै, धान सबै किसिमका अन्न र दलहन कुटानी–पिसानी हुने गर्छ । बिहान सखारैदेखि कल्पनाले कुटानी–पिसानीमा समय बिताउँछिन् ।
मिलमा गहुँ र दाल पिसानी गरेको किलोको ६ रुपैयाँ पर्छ भने चामल, मकै, दाना पिसेको प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ लाग्ने उनले बताइन् । बेसार र मसला पिसेको प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ र तोरी पेलेको किलोको १३ रुपैयाँ लाग्ने कल्पनाले बताइन् । यसरी सरदर हिसाब गर्दा औसतमा दिनमा २ हजारदेखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म कुटानी–पिसानीबाट आम्दानी हुने सुनाइरहँदा उनको मुहारमा खुशीको मुस्कान थियो ।
कल्पनाले कुटानी–पिसानी मात्र गर्दिनन्, बर्दिया, दाङ र पहाडी जिल्लाबाट तोरी, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र गेडागुडी किनेर पेल्ने, कुटाउने र पिसानी गरेर खुद्रा रूपमा बेच्छिन् । बर्सेनि २०–२५ लाख रुपैयाँका अन्न, दलहन, तेलहन खरिद गरेर बिक्रीबट्टा गर्ने कामले उनमा थप कामको जिम्मेवारीबोध भएको सुनाइन् ।
उनको कामबाट प्रभावित हुनेहरू धेरै छन् । मिलमा आउने सबैसँगको व्यवहार र इमान्दारिताले आफू हालसम्म व्यवसायमा टिकेको उनी बताउँछिन् । ‘मिलमा आउनेहरू फोन गरेर सोध्छन्,’ उनले भनिन्, ‘म पनि फोन आउनेबित्तिकै सबैथोक छाडेर पिसानी गर्छु ।’
उनले कहीँबाट अनुदान लिएकी छैनन् । आफ्नो वडाका जनप्रनितिधि र कर्मचारीहरूले मिलमा आएर नेपालमै रहेर नेपाली महिलाले गरेको जोखिमपूर्ण कामप्रति गरेको सम्मान र उद्यम गर्न दिएको हौसलाले ठीकै काम गरेको रहेछु भन्ने उत्साह जागेको कल्पनाले बताइन् ।
२०७३ सालमा आफ्नै तरिकाले मिल सञ्चालन गर्न थालेपछि दिनरात नभनी कल्पनाले दुःख गरेकी छन् । पतिको साथ समेत लिएकी छन् । अति नै कामको चटारोले उनलाई सधैं असारको १५ नै हुने गर्छ ।
२ भाइ र २ बहिनी थिए कल्पनाका माइती घरमा । बुवाआमाले भैसीपालन र कृषि कर्म गरेर राम्रै घरव्यवहार चलाएका थिए । उनका बुवालाई भेटेनरी सम्बन्धी राम्रै ज्ञान थियो । माइतीघरमा खासै दुःख थिएन । बुवाआमाले पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा राखेर उनलाई पढाएका थिए ।
माइतीघरकी जेठी छोरी कल्पनाले पाल्पाको तानसेनस्थित मोहनकन्या माविबाट २०६० सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेकी हुन् । प्रवेशिका परीक्षा दिएपछि उनको बिहे भयो । बिहेपछि उनी तिलोत्तमा नगरपालिकामा आइपुगिन् र अहिले उनको परिवार तिलोत्तमा नगरपालिका–३ रुपन्देहीपथमा स्थायी वासिन्दाका रूपमा बस्दै आएको छ ।
२०६२ सालमा उनले शंकरनगरमा रहेको न्यू लाइट आवासीय माविबाट ११–१२ कक्षा समेत उत्तीर्ण गरिन् । उनलाई पढाउनका लागि पति कृष्णको अति नै सहयोग थियो । उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने उनको रहरलाई घरधन्दा, सन्तानको जन्म, सुत्केरीपछि पक्षघात भएकी देउरानी र उनका सन्तानलाई गर्नु परेको स्याहारसुसारले पूरा गर्न दिएन ।
उच्च शिक्षा पढ्न नपाए पनि कल्पनाले आफ्नो उद्यममा गरेको मेहनत हेर्दा विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेटधारीभन्दा कुनै कुरामा कमी देखिँदैन । घरधन्दा र मिलको कामले उनलाई छिनभर फुर्सद छैन । ग्राहकको सेवाका लागि कहिलेकाँही उनी बिहानै ५ बजे र राति १०–११ बजेसम्म खटिएकी हुन्छिन् । त्यो उनको सेवाभाव पनि हो ।
कल्पनाका पति कृष्ण मेकानिक हुन् । मिल बिग्रिएर कल्पनालाई कुनैदिन रोकिनु परेको छैन । भारतको पञ्जाव, दुबई र कोरियामा उनले विभिन्न समयमा आफ्ना सीपहरू तिखार्न पुगे । पछिल्लो पटक उनी सन् २०१६ मा दक्षिण कोरियाबाट नेपाल फर्केपछि आफ्नै ठाउँमा कर्म गरिराखेका छन् ।
उनीसँग बुटवल पावर कम्पनीमा टर्वाइन बनाउने काम गरेको अनुभव पनि छ । अहिले आफ्नो मिलबाहेक अन्य उद्योगमा समेत मेकानिकल सेवाहरू दिँदै आएका छन् उनी ।
कल्पनाको माइती घर पाल्पाको बराङ्दी र कर्मघर पाल्पाकै ख्याहा गाउँ थियो । उमरेले १८ टेक्दै गर्दा कल्पनाको २०६० सालमा कृष्णप्रसाद पाण्डेयसँग बिहे भएको थियो ।
अहिले कल्पना दम्पतीका छोरा रोशन बुटवलको कालिका मानवज्ञान माविमा ९ कक्षामा पढ्दैछन् भने छोरी कृपा तिलोत्तमाको स्मृति बोर्डिङ स्कूलको ७ कक्षामा पढ्दैछिन् । सानो र सुखी परिवारले उनीहरूको सम्पन्नताको परिचय दिइरहेको छ ।
कल्पनाको भविष्यको सोंच भनेकै आफ्नो तेल मिललाई व्यवस्थित गर्ने, सबै किसिमका सेवासुविधा दिने र बिजुली नआउँदा समेत जेनेरेटरको सहायताले कुटानी–पिसानीलाई निरन्तरता दिने रहेको छ ।
बैंककको सम्मानले लुम्बिनीमा जन्मिएको उद्यम
विभिन्न ‘प्रोजेक्ट’को सिलसिलामा मेघनाथ आचार्य झण्डै ३ दशकअघि थाइल्यान्ड (बैंकक) पुगेका थिए । ‘लुम्बिनीबाट आएको हुँ’ भनेर परिचय दिँदा त्यहाँका नागरिकले उनका खुट्टा ढोगेपछि उनी सोचमग्न भ...
गुल्मीका १२ स्थानीय तहमध्ये विकट गाउँपालिकाको रूपमा मालिकालाई चिनिन्छ । पालिकाका ७४ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरू घरमै जोखिमपूर्ण रूपमा सुत्केरी हुन्थे । अस्पताल आउनुपर्ने अवस्थामा पुगे ६० किलोमिटर टाढा तम्घास व...
छ्वालीमा 'जीवन भर्ने' चार्ली
भक्तपुरको सूर्यविनायक बस्ने २३ वर्षीय रोशन बानियाँ (चार्ली) गहुँको छ्वालीबाट आकर्षक चित्र बनाउँछन् । सानैदेखि विभिन्न चित्र कोर्ने गरेका चार्लीले गहुँको छ्वालीबाट चित्र बनाउन थालेको झण्डै ४ वर्ष हुन लाग्यो ।...
घुमन्ते सफाइ अभियन्ता– दमक र महेन्द्रनगर सफा बनाए, बंगलादेशमा गाली खाए !
पुस २९, २०७८
कीर्तिपुरका राजमान मानव सफाइ अभियन्ता हुन् । विश्वका हरेक कुनाकाप्चामा पुगेर सफाइ गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका उनले विभिन्न देश पुगेर सफाइ अभियान चलाइसकेका छन् । १२ वर्षदेखि निरन्तर यस अभियानमा होमिएको...
उद्यमी युवा : स्नातकोत्तर पढेपछि घरमै चरा पालेर मासिक ५० हजार कमाइ
समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हेटौंडा–४ का प्रकाश सुवेदी बट्टाई चरापालक किसान हुन् । ३६ वर्षीय प्रकाश स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिने बट्टाई चराको अण्डा र मासु बेचेर व्यवसायी बनेका छन् । प्रक...
पोखरा चिनाउने शरणार्थीहरूको कथा
उतिबेला तिब्बतबाट हिँडेर मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै पोखरा झर्दा बाटोमै जन्मिएकी आफ्नी आमाको कथाले ३८ वर्षीया हिसी छोइडेनलाई आज पनि झस्काउँछ । तिब्बतबाट करीब एक हप्ताको पैदल यात्रापछि हिसीकी आमा मिगमार ...